घेराबन्दीमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा – Setosurya
घेराबन्दीमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा
बिहीबार २८, भदौ २०७५
काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आन्तरिक विवाद बढिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एक अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच नै भित्रभित्रै द्धन्द्ध बढेको नेकपाका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि दम्भ बढ्दै गएको, यता दाहाल भने आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन पार्टीभित्र बलियो गुट निर्माणमा सक्रिय रहेको बताइन्छ । सरकारले गरेका काम जनस्तरदेखि सत्तारुढ दलभित्रैसम्म आलोचित भइरहँदा ओली कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा दाहालले गुट निमार्णलाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।
पूर्व माओवादीका लगभग सबै नेता र पूर्व एमालेका पनि धेरै नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा लाग्न थालिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालदेखि बामदेव गौतमसम्मका नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा रहेको नेताहरुको दाबी छ ।
श्रीमानद्धारा श्रीमतीसहित पाँच जनाको गोलीहानी हत्या
यस्तो आयो बाम तालमेलको अन्तिम सहमती, हेर्नुहोस् कसले कहाँ र कति सिट पाउँछन् ?
एमाले अध्यक्ष ओली डा.बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता ? यस्तो छ कारण……
देउवाले अध्यादेश विषयमा यसरि लिंदै छन् एक्सन……..
एमालेले बनायो राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारको यस्तो मापदण्ड !
कांग्रेसले गोविन्द केसीकाे नाममा ‘इमोसनल व्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेको छ – याेगेश भट्टरार्इ
किन बामदेबलाई काँध थाप्दैछन् ओली ? प्रचण्ड र माधब नेपालसँगको सम्बन्ध सकिएकै हो ?
चार वटा विषयमा संविधान संशोधनः प्रधानमन्त्री
मेची–महाकाली अभियान विथोल्न खोजे १० हजार स्वयमसेवक हात बाँधेर बस्दैनन्ः योगेश भट्टराई
नेकपाका नेता विप्लवकाे फेरी यस्ताे अायाे चेतावनीमूलक बिज्ञप्ती (हेर्नुहोस् बिस्तृतमा)
आजदेखि ट्राफिक नियममा थप कडाइ
नयाँ रुट हुँदै गुर्जा हिमाल चढेका ९ आरोहीको मृत्यु
धौलागिरीमा पर्यटकको घुईँचो, आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्वतमा व्यापार बढ्यो
ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘के हुँदा मधेशी मोर्चा चुनावमा आउँछ?’
पर्वतका प्रहरी प्रमुखकाे नयाँ एक्सन, जुवा तासका खालमा प्रहरीकाे कब्जा ! जुवाडेहरूकाे खैलाबैला…….
प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण आजः पहिलो चरणमा छरितो मन्त्रिमण्डल
मन्त्री माग्ने क-कसलाई झपारे देउबाले ?
यसरी जित्दैछ्न् पर्वतमा पदम गिरीले यस्तो छ, वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मतान्तर !
दरबारबाट बाहिरिएका हौं, जिम्मेबारीबाट होइनः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
रोल्पा उडेका प्रचण्ड किन एकाएक रुकुम हानिए ?